समाचार Archives - Page 16 of 18 - Enepali Online
उदय राई (दक्षिण कोरिया ) – दक्षिण कोरियाले एसियाको बिभिन्न १६ देशबाट इपिएस रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत प्रवासी मजदुरहरु लाने गरेको छ । यसरी लाने प्रवासी मजदुरहरुको कोटा कोरियन सरकारले प्रत्यक बर्ष तोक्ने गर्दछ । २०१८ मा कोरियन सरकारले लाने प्रवासी मजदुर कोटा आज बसेको (डिसेम्बर १५ ) प्रवासी मजदुर कोटा निर्धारण समितिको बैठकले निर्धारण गरेको छ । कोटा निर्धारण समितिमा सरकारको तर्फबाट १२ जना ,मजदुर संगठनबाट २ जना ,कम्पनी ब्यबस्थापक र अन्य क्षेत्रबाट…
"2018 का लागि कोरियामा लाने मजदुरको कोटा निर्धारण"
काठमाडौं लगायतका सहरमा बसाइँसराइको चाप घट्ने अनुमान सरकारले मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गका आसपासका क्षेत्रमा १३ वटा स्मार्ट सिटी र २७ बटा नयाँ सहर बनाउने भएको छ । प्रत्येक सहरमा १ १ लाख जनसंख्या अटाउने लक्ष्य लिइएको आयोजना निर्देशक पराग कायस्थले जानाकारी दिएका छन् । नयाँ निर्माण हुने शहर अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न हुने र सहरका पूर्वाधार पनि समेटिने बताइएको छ । आयोजना निर्देशक कायस्थका अनुसार मध्यपहाडी क्षेत्रमा भौगोलिक विकटताका कारण पनि केही चुनौति रहेको बताएका छन् ।…
"नेपालमा १३ स्मार्ट सिटी र २७ नयाँ शहर बन्दै, कहाँ कहाँ बन्दैछन् ? !! पूरा हेर्नुहोस्"
भिडियो समाचार सिधा कुरा जनता संग
काठमाडौं, २९ मंसिर : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटबार्ता भएको छ । निर्वाचनपछिको उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच शुक्रबार राजधानीमा भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्तामा एमाले र माओवादीवीचको पार्टी एकता, सरकार गठन प्रक्रिया, नयाँ मन्त्रिमण्डलको गठनका साथै राष्ट्रियसभा सम्बन्धी अध्यादेश लगायतका विषयमा छलफल भएको छ । बार्ताका क्रममा दुवै नेताले पार्टी एकीकरणमा अवरोध आउन नदिने भन्दै…
"प्रचण्ड र ओलिविच सक्कियो भेटवार्ता ! यस्ता भए निर्णय, कार्यकर्तालाई समेत आयो सुझाव"
"भारतले अब १० वर्ष नाकाबन्दी गरेपनि नेपालमा फरक पर्दैन, यस्तो छ खुशीको खबर पुरा पढ्नुहोस"
काठमाडौं । चुनावी परिणामले वाम गठबन्धनको सरकारलाई स्वागत गरिसकेको छ । मतपरिणाम र वाम घटक एमाले-माओवादीबीचको सौहार्दताले अबको सरकारका प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी ओली हुनेमा कुनै अलमल छैन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली नै अबको प्रधानमन्त्री भनेर उद्घोष गरिसकेका छन् । अबको सरकार कसरी गठन हुन्छ त? सरकार बन्नका लागि के के बिधि र प्रकृयाहरू छन्? आजको नयाँ पत्रिकाले सरकार गठनका यी चारवटा प्रकृयाबरे लेखेको छ । बहुमत ल्याउने संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्…
"यसरी बन्दैछन् केपी ओली प्रधानमन्त्री"
काठमाडौं। प्रहरीले दरबारमार्गस्थित डेजाभू क्लब तोडफोडपछि पक्राउ परेकाहरूले ठगी मुद्दाअन्तर्गत कारबाही भोग्ने भएका छन्। तोडफोडका मुख्य कारक डिजे भने काठमाडौंको तारे होटेलमा आराम गरिरहेका छन्। अमेरिकी डिजे (डस्को जक्की)का नाममा डेजाभू सञ्चालक र इभेन्ट अर्गानाइजरले सर्वसाधारणसँग रकम संकलन गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई ठगी मुद्दाअन्तर्गत कारबाही अघि बढाइएको हो। प्रहरीका अनुसार तोडफोडका क्रममा डेजाभू सञ्चालक विशाल डाँगी, जयन श्रेष्ठ, मयक खड्का, मिलन श्रेष्ठ, पृथु बास्कोटा, राजीव महर्जन, आकाश न्यौपाने र रितेश मारबाडी पक्राउ परेका छन्। त्यसमध्ये मारबाडी…
"क्रिकेटर बास्कोटासहित डेजाभू सञ्चालक पक्राउ, मार्समेलो भने फाइभ स्टारमा"
खाटमुनी दूधे बालक राखेर बेड माथी परपुरुष सँग अनैतिक सम्बन्ध राखे पछि